Chii chinonzi kutaura kwaStallman? | Linux Vakapindwa muropa
Chii chinonzi kutaura kwaStallman?
Iyo Kutanga National Congress Yemahara Software muChile, semumwe wevaratidziri vako achazoziva, uye uyo akanyanya kutarisirwa, aive mutungamiri wenyika FSF uye muvambi weiyo GNU chirongwa, Richard Stallman. Sezvo ini ndaive ndega ndaive nenguva yekuenda, ndakaenda kuhurukuro, kupfuura zvakajairwa kupfuura zvakajairwa, Stallman anozivikanwa mukupa hurukuro pamusoro pe "hondo tsvene" pakati pemahara vs software yevaridzi. Asi, kunyangwe hazvo zvisiri muchibvumirano nemafungiro ake, hazvigoneke kuti usaone hunhu hunokudzwa, saka ndichaongorora imwe neimwe yemapoinzi ake nhanho, izvo mukati mavo zvakati wandei, asi kana uchivatora zvakanyanyisa. kuwedzeredza kwakakwana.
1 Tsika nehunhu
3 Nhoroondo yeGNU
4 Stallman vs Torvalds
5 Rusununguko muMasangano eruzhinji
Hurukuro yakatanga naStallman achitsanangura zvinoreva software yemahara senge inoremekedza rusununguko rwemushandisi, kuzvipira kwavo kuhukama hwemagariro munharaunda (rangarira izwi rekuti "kugarisana" sezvo richange rakabatikana kwazvo muchinyorwa chino…).
Richard anobata mune ake mapoinzi chimwe chinhu chisiri chisina musoro kana ukachitarisa kubva kune isina kunyanyisa kukona, iyo ina rusununguko runodiwa kuti software ichinzi "yemahara".
Chekutanga ndechekuti chirongwa chinofanirwa kumhanyisa uye kushandiswa semunhu anoda.
Chechipiri ndechekuti kodhi yekodhi yechirongwa inofanirwa kubvumidza kudzidza kwayo uye nekuchinja.
Chechitatu ndechekubatsira muvakidzani wako nekutepfenyura nekuparadzira chirongwa pachena, iri ibasa retsika.
Chechina ndechekupa rubatsiro munharaunda.
Idzi rusununguko, sekutaura kwaStallman, ndizvo zvinokosheswa kuti mushandisi ave akasununguka, kusvika pakuratidzira kakawanda kuti vanofanirwa kuve chikamu chekodzero dzevanhu.
Kunze kwekusimudzira rusununguko urwu, inoshoropodza software yevaridzi, ichizviti "kurova kusiri kwechokwadi" kunokuvadza nzanga, uko munhu anogovera zvirongwa zvavo uye / kana mimhanzi anonzi "pirate." Anojekesa kuti abvunzwa kakawanda zvaanofunga nezve "vapambi", uye anopindura nemaitiro ake ekuti "kurwisa ngarava kwakaipa kwazvo" uye kuti "vapambi havashandise makomputa kurwisa ngarava." Kuti vanhu vanofarira yemahara software "dhimoni" vanhu vanobatsira vamwe vanhu. Sekureva kwaStallman, anofarira kuita zvakaipa zvishoma kana akapihwa mukana wekugovana software yevaridzi, nekuti "vanogadzira vanokodzera nekuti vanozviita vega, kurwisa nzanga", asi chinhu chakanakisa kudzivisa matambudziko ezvehunhu nekuramba software yepamutemo. .
Richard Stallman anotaura nezve izvi zvirongwa zvakashata zviripo mune software yekudyara uye nematambudziko akakomba avanogadzira, imwe yemienzaniso (iri pachena) ndeyeMicrosoft Windows, inounza DRM kana sekutaura kwake, "mahandcuffs edijitori". Inobata nevanonyanya kudzoka mumashure muWindows senge kushandura zvirongwa pamadiro uye chirongwa chakaisirwa mapurisa muUS (surveillance). Achipikisana neizvi, anoti kuchengetedzeka kwesystem hakuna maturo (kwete nyowani ...). Mumwe muenzaniso waanopa ndeye Iphone (anoidaidza kuti "ICROME"), nekuda kwekurambidzwa kwayo pakuiswa kwezvikumbiro uye kuiswa kweshanduko (kugadzirisa). Muenzaniso wekupedzisira waanopa ndewe KINDLE, achipokana kuti yakasungirirwa ne DRM, ichitarisa kutengwa kwemabhuku kubva kuAmazon uye ichitaura nyaya iyo Amazon yakaraira kudzima makopi ebhuku (1984).
Richard zvakare anoti hazvigoneke kuziva kana software yega yega yakaipa, nekuti haugone kudzidza kodhi yekodhi, asi kana akasimbisa kuti "vanogadzira software vanhu, uye vanhu vanokanganisa, vachizvidira kana kwete nesoftware yepamoyo. Iwe uri musungwa wemhosho idzodzo ”. Ndosaka mukana wemahara software ndeyekuti kana iwe usingade kodhi iwe unogona kuivandudza uye / kana kuichinja paunoda.
Ini handisi kuzoenda ndichinyatsotsanangura nezvenyaya iyi, nekuti ndinotenda kuti vanenge tese tinoziva nyaya yacho, saka ndichabata zvidzidzo zvandakaona zvakakosha.
Stallman anosimbisa izvo akatanga chirongwa nekuda kwekuda kwenzira yaive yemaharaNeimwe nzira akanzwa kuti raive dambudziko "remagariro" uye kuti aifanira kuita chimwe chinhu sezvo aifunga kuti kana akasazviita, hapana mumwe munhu angachiita, kuti raive basa rake kubatsira (kana kumira kunze?).
Inofunga kuti iyo system inofanirwa kunge yakafanana neUNIX yekutakurika kwayo, ichifunga nezvekushanduka kwemakomputa mune ramangwana.
Iye anotsanangura kuti sei GNU, iyo sekureva kwake, iri jee iri chirevo (zvinosetsa panguva yake?), Inoti GNU haisi Unix. Zvakare izvo sekureva kweduramazwi reChirungu "g" rakanyarara, saka zita racho raizove "Nu" iro raizove idzva, iro raidaidza pfungwa yekuseka mupurojekiti sechinhu chitsva.
Anotitaurira kuti kusarudzwa kweiyo kernel ye "new system" yaive Mach microkernel, GNU / HURD, asi iyo hafu yacho yakanga isati yanyorwa uye haina kumbobvira yagadzikana kuti ishandiswe. Izvi zvakatungamira kumudzidzi weFinland mu1991 kuburitsa yake monolithic kernel inonzi "linux", iyo inotisvitsa kumusoro unotevera ...
Pano iyo Linus misiyano naRichard, uye maitiro aanotora muhurukuro dzake dzese, achitanga zvinyoro nyoro achiti kugadzirwa kwe linux kernel yaive imwezve mupiro weprojekti, kuti pakutanga vaive nematambudziko nelayisensi (Torvalds yakaburitsa linux nerezinesi raitadzisa makambani kubva vachishandisa kernel yavo, uye iyo FSF inotsigira rusununguko kune chero munhu), iyo yakazoshandurwa ikaitwa GPL.
Izvi zvinoshanduka kubva kushoma kusvika pakuwedzera apo Stallman anoti hazvina kunaka kuti chikwereti chose chiende kumunhu mumwechete pabasa rese (ichokwadi), uye zvinopfuura zvimwe, iye (Linus) akangoita tsanga (chinhu chidiki kwete ?).
Anosimbisa kuti Linus Torvalds haana kumbotsigira kufamba kana huzivi hwemahara software, sezvo achifarira hurongwa hunoshanda zvakakwana, Stallman anoti Torvalds haaremekedze rusununguko rwake achisimbisa izvi uye kuti dai zviri zvehurongwa hunoshanda ari kuda kushandisa software yeimba. Imwe yeiyi hova dzeTorvalds ndeye Open Source, iyo Stallman inoramba zvakare kubvisa izwi rekuti Mahara Software, ichingoendesa kuOpen Source, iyo inobvisa rusununguko kubva kumushandisi.
Rusununguko muMasangano eruzhinji
Stallman anojekesa iro basa rezvemagariro iro rinofanira kutora nyika yehutano maererano nesoftware. Ipa mienzaniso uko Mahara Software yakagamuchirwa, Venezuela neEcuador. Iyo yekupedzisira ndiyo inomira zvakanyanya kuve musimudziri wepasirese, kusvika pa rambidza software yepamutemo kubva kumasangano ehurumende (hudzvanyiriri?), Zvinotenderwa naRichard zvachose.
Mune chimwe chikamu chebhizinesi revanogadzira uye kugadzira mabasa zvine chekuita neFree Software, anoti ibasa rehurumende kusimudzira tsika yekomputa nesoftware yemahara, nekuti izvi zvichagadzira makambani ekuvandudza nekusimbisa, ayo anosimudzira hupfumi uye musika wepachena. . Kukurudzira izvi mudzidzo kwakakosha, nekuti kune zvikonzero chete zvehupfumi zvezvakanaka, nekuti zvikoro zveruzhinji hazvina zviwanikwa zvakawanda kunyangwe munyika yakabudirira.
Mushure meizvi, anorwisa Microsoft nenyaya ye "kupa" marezinesi eWindows kuzvikoro zveruzhinji, nekuti anoashandisa kumisikidza hurongwa hwavo nekugadzira kuvimba nevadzidzi. Kusvika pakuenzanisa marezinesi aya ne "madhiragi emishonga."
Mukupedzisa, kunyangwe paine chokwadi chekuti mazhinji emapoinzi anotaurwa naStallman mune yega yehurukuro dzake anodzokororwa (ndanga ndiri kuhurukuro mbiri uye nyaya yacho yakafanana), pane chikonzero chakawanda munharo dzake, yakaipa chinhu ndechokuzviisa mukunyanyisa kwekuve musimboti, uchifananidza izvi ne "hondo tsvene." Mundima dzinoverengeka mushure mekutaura zvinhu "kune zvakanyanyisa" akaedza kuzorodza mhepo nejee, saka ndinogona kutaura kuti dai Richard Stallman anga asiri mugadziri angadai ari mutambi, anozviita nemazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Chii chinonzi kutaura kwaStallman?
Victor pereira akadaro
Zvinonakidza zvakadaro ini ndichiri kufunga iye muTaliban ...
Pindura kuna Victor Pereira
Pindura kuna n3m0
Izvo zvinogara zvakafanana "Denga neGehena", "Mwari naDhiabhorosi" ... uye pakati isu tinomhanya kubva kune rumwe rutivi kuenda kune rumwe.
Ichi chibharanzi chinhu chiri kutiuraya isu.
Chinyorwa chakanakisa +10
Pindura kune 128kprs
Stallman ane gakava kwazvo, mumaonero angu akabatsira zvakanyanya muindasitiri nekutenda kune izvo zvinangwa, asi iwo maonero ekuona nyika yandisingafunge seyakakodzera, vamwe venyu mune zvese pane komputa yako mune yemahara software? zvikuru, vashoma.
Yemahara software uye muridzi anofanira kuramba aripo, hupenyu hwakareba kune ese ari maviri.
Kunyangwe zvinotaurwa naAndres, zvinoshanda chose, ini ndinosiyana nerusununguko runotaurwa naStallman kurusununguko rwandinotenda pachangu, munhu wese akasununguka kusarudza zvavanoda, zvingave zvemahara kana zvakavanzika software. Zvino kumanikidza? icho chimwe chinhu, zvine chekuita nekuseka, ini ndaifunga kuti yaive yakanaka, ini ndaida kuinunura. Uye hazvigone kurambwa kuti misoro yakurukurwa yakafanana, uye mundima dzinoverengeka kana iye pachake akataura kuti kwaive nenzira yezvakanaka uye nenzira yezvakaipa (pamwe neBee joke yaisanganisira ...). Vanhu vakaita saStallman vanowedzera zvinonaka pasirese saka ini handipikise zvachose kana kushora nzira yavo yekufunga, munhu wese akasununguka kutevera waanoda.
uye mubairo wekushamisika? XD
@psep: Ndinofanira kutaura nezvazvo newe hongu, nditumire kero yako mukati: P
Ndakaenda kuhurukuro yake ndikaiwana iri pakati uye ichivaraidza. Handina kunzwa nezvemoto wemoto kana hondo tsvene. Kana ini handina kumuwana akanyanyisa kana kudaro Taliban.
Akabvunza vanhu kuti vasavhiringidze pakati pemaonero aTorvalds nemitemo yeFSF. Akabvunza vanhu kuti vasazvidze basa reFSF nechirongwa cheGNU-Linux.
Iyo yaiyeuchidza vanhu nezve izvo zvinotsanangurwa neFSF seSL.
Kushoropodza kwavo kwaive kwakavakirwa pazviitiko chaizvo, zvinoitika uye mienzaniso iri zivo yeruzhinji.
Akarumbidza nyika yeEcuador nekugadzira mutemo uye nehurongwa hwekutonga komputa yezvishandiso zveruzhinji. Chinhu chinonzi mazuvaano mamiriro ehurumende. Mune dzimwe nyika nyonganiso inotonga uye hapana kana mamwe maratidziro akapindirana. Uye zvakare, iyo US inomanikidza makambani ayo kuendesa kurambidzo kune nyika dzemagariro, saka zviito izvi hazvina chekuita nehudzvanyiriri.
Ingo wedzera kuti izvo zvandakaona aive akanaka munhu, akangwara akangwara uye aine musvinu wakanaka.
Psep: Hungu, ini handioni kuti imi naVaStalman makasiyana sei ipapo, nekuti murume uyu akasimbirira zvakanyanya irusununguko rwemushandisi. Izvi akazvidzokorora kakawanda muhurukuro uye ndinofunga akazvisimbisa nekuti ndicho chinhu chakanyanya kukosha mushoko rake ... Icho chinhu chakaipa kana chakatsauka chaive chisiri musoro wehurukuro yake.
Andrés: Kune rumwe rusununguko rwakakosha kupfuura idzo dzakatumidzwa naStallman, rusununguko rwekusarudza Software inonyatsokodzera iwe, sosi yakavhurika inondikodzera, iyo inobata ipapo, yemahara software pano. Wese munhu akasununguka kuita zvavanoda, asi harusi rusununguko kuyedza kumanikidza kufunga, semuenzaniso, kurambidza proprietary software, iwe unotyora rusununguko rwemusika uye zvichidaro yevatengi veizvi ...
Uye chingave chei? XD
Psep: Iyo yemusika wepachena iye akataurawo muhurukuro yake uye akabvumawo kuti yaive kodzero yako kugona kusarudza masevhisi uye mupi waunoda. Sekureva kwake, iyo SL inoputsa zvimiro zvechiremera mukuda rusununguko rwevashandisi.
Kudzokera kumuenzaniso weEcuador (iyo inoita kunge ine gakava, asi chidimbu chakaburitswa apa hachina kukwana) Stallman akati yaive yakanaka modhi uko kushandiswa kweSL kwaive nerombo rakanaka kune iyo nyika yecomputer chikuva (kwete musika, asi iyo State) uye uko software yepamutemo yaibvumidzwa kushandiswa asi neyakajeka technical technical. Uye akati akabvumirana nazvo. Uye akazvitora sechiyero chakanaka sezvo masangano eHurumende asina basa kwavari sekambani, asi aive nemabasa kuvagari mukuwedzera kune basa rekuchengetedza hutongi hwenyika.
Mukupedzisira, aya mazano haana chinhu chitsva. Ini handione zvinokanganisa. Chandaifunga sekutanga ndechekuti Stallman anogadza rusununguko rwevashandisi senge vezvematongerwo enyika uye vasingabvisike muzvisikwa (nekudaro kutaura kwavo kuti vanofanirwa kuve chikamu chekodzero dzevanhu) uye kwete sezvazviri zvino marisensi emushandisi. Akagadzwa nekambani imwe neimwe.
Ini handidi kurira semunhu asinganetsi, asi ndinofunga kuti pfungwa zhinji kana kushoropodzwa kwaizobviswa dai hurukuro dzaVaStallman idzi dzakanyorwa zvizere. Kana ndikakwanisa kushoropodza chinyorwa ichi, ndinofunga chidimbu hachina kukwana chete, asi kunyangwe chakarerekera. Ini ndinonzwisisa kuti vhidhiyo yemusangano wakapihwa muChile inowanikwa pane iyo GNUChile saiti.
Andrés, mmm wanga uri hurukuro ngani dzeRMS ??? Wese munhu ane maonero ake, asi zvandinotaura pano hazvisi zvitsva, zvakafanana zvinotaurwa kwese kwese, inyaya yekufamba zvishoma nezvaStallman, ini pachezvangu ndinogovana mazano ake mazhinji, asi ini ndinosiyanawo pane akati wandei, Izvo ndosaka ndakapa maonero angu, uye sezvawataura zvakanaka, pane vhidhiyo uyezve pane odhiyo yehurukuro, munhu wese anoiterera / anoiona uye obva afungisisa. Nezvo idzi nhaurirano nhatu kubva kuRMS.
Nhoroondo yako iri nyowani uye iwe wakanyora yakanaka chinyorwa.
Chengetedza iyo Psep.
Kunyanyisa kwaStallman kunokosha. Zvinokuvadza kufarira kwese here? Ini handifunge, asi zvinomubatsira. Kana budiriro iri yakanaka, zvirinani kuigovana, kuitira kuti vamwe vawane mukana wekuzviita zvirinani.
Nehurombo, nyika ino inogara ichingotungamirwa nezvakavanzika zvido, zvido zvevanhu hazvina basa, zvese kukwikwidza uye kuda. Kana kambani ichida kushandisa marezinesi ayo anotendera kuvhara kodhi, ngavachiite, vane zvipingaidzo here? Ndiyo FSF nzira yekubvunzurudza ine nzira dzekudzora iyi rezinesi?
Ehe, zviri nyore kwazvo kuvhara bumbiro rekodhi kusimudzira mune hupfumi vashandisi vayo. Uye kana, nenzira, iwe unogona kusevha mune zvinhu zvinokanganisa kuvanzika kwako kuti ubatsirwe nekambani, kunyangwe kusununguka.
Sezvo sekasi ino yatinogara yakagadzwa, maitiro emakambani mazhinji eIT ari: tichagadzira chimwe chinhu chinopfuura, chinosangana nezvinotarisirwa nevatengi vedu uye zvinotibvumidza kuchengetedza kana kuwedzera purofiti.
Iyo tsitsi ndeyekuti hazviitike chete mukomputa. Zvakare mune hutano, pekugara, mari, chikafu. Vazhinji vevagari vepasi vanogara mumamiriro asiri emunhu kana kufa nekuda kweiyi uzivi hwehupenyu. Nepo vamwe vachirarama nekumhanya kuzere kana isu tichigara nekumwe kunyaradzwa, chaizvo pakurasikirwa kwekutambudzika kwevazhinji. Takanyara!
Kudzokera kukomputa, ndinofunga chinhu chakanakisa, kune zvakanaka zvese, kungave kushandisa iyo GPL modhi. Izvo zvinokwanisika kuti mune ipfupi kana yepakati izwi raizove jam (shanduko dzaisambofa dzakasununguka), asi nekufamba kwenguva yaizove yakanakisa, kunyanya kana marezinesi ekudyira uye monopolies zvanyangarika (izvo zvisingaitike). Ngatitii isu takave nemukana wekutora nhanho yekudzoka kuti tione nzira yekuenda nayo kumhanya. Dambudziko nderekuti kune rusvingo rwakasimba kwazvo pamberi pedu uye zvinenge zvisingaite kuzvikunda: zvido zvehupfumi zvemari hombe.
Vakuru vanokudzwa, imi munoziva, goverana kana kuita chimbadzo, uyu ndiwo mubvunzo ...
"Wekupedzisira ndiye anonyanya kumira mukusimudzira nyika, kusvika pakurambidza software yevanoshanda mumasangano ehurumende (hudzvanyiriri?), Izvo Richard anotendera zvachose."
Ini ndinofunga iwe unovhiringidza hudzvanyiriri nechena hwehutongi chiyero chesangano senge nyika. Chinhu cheudzvanyiriri chingave chekumanikidza vagari, munzvimbo yavo yega, kuti vashandise mahara software. Kana iwe uchida kuona vadziviriri vemahara software sevashiviriri vasingashiviriri iwe uchavaona, iwe unongofanirwa kujekesa pfungwa dzako dzezvematongerwo enyika zvishoma kuti uone kuti hazvina kudaro asi hesi, mumwe nemumwe nekusarura kwavo.
Mufaro kuna Stallman :)
Nhoroondo izere nevanhu vanokosha avo vakatanga kunzi vanopenga, magandanga, vanyengeri.
(Colon, Galileo, Da Vinci, Bolivar, nezvimwewo, nezvimwewo)
Kwandiri Stallman muoni saHugo Chavez.
Nhoroondo ichave mutongi wako.
Jp Neira akadaro
Psep: Ichokwadi kuti kune rusununguko rwekusarudza, asi zvinopera kana iwe uchifanira kusarudza pakati pechinhu chakanaka nechisina. Uye ini ndinofunga vazhinji vedu tinobvumirana kuti software yeimba haina kunaka munzira dzakawanda.
Zvinhu zvisina kunaka zvinofanirwa kupedzwa, kwete kukudzwa.
Zvirinani ndicho chinzvimbo changu.
PS: Kunyora kwakanaka ndinokukorokotedza.
Pindura Jp Neira
ndinofunga microsoft inosarudza yakavharwa windows kune yakaiswa linux
Windows XP vs Windows 7 pane netbook